धेरै पसिना आउनु हृदयघा’तको संकेत – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. धेरै पसिना आउनु हृदयघा’तको संकेत – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
खानपान, जीवनशैली र बानीव्यवहारका कारण मुटुसँग जोडिएका विभिन्न प्रकारका रोगहरुको खतरा बढाउँछ । हृदयघात पनि तिनै रोगहरुमध्ये एक रोग हो । रगत जमेर रक्तनली बन्द हुँदा मुटुसम्म रगत पुग्न नसक्दा हृदयघात हुन्छ । हृदयघा’तमा छातीमा पी’डा महसुस हुनुका साथै शरीरमा देखिने थुप्रै लक्षणहरुले हृदयघा’तको संकेत गर्छ ।
व्यायाम गरेपछि, गर्मीमा पसिना आउनु सामान्य नै हो । तर, अचानक कुनै पनि कारणबिना पसिना आउनुलाई स्वास्थ्यमा गड’बढी भएको संकेत हुन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । कहिलेकाँही छाती दुख्ने, हातमा पसिना आउने र माशंपेशीहरु दुख्नु हृदयघा’तको ख’तरा हुनसक्छ ।
कुनै पनि व्यायाम वा काम नगरी अत्यधिक पसिना आउनु हृदयघा’तको संकेत हुनसक्छ । मुटुमा रगत पुर्याउने रक्तनलीहरुमा कोलेस्टोल जम्मा हुन जान्छ जसको कारण यस्ता नलीहरु बन्द हुन पुग्छन् । जसले गर्दा रगत प्रवाह हुन मुश्किल हुन्छ । जसको कारण रगत प्रवाह कम हुँदा मुटुमा दबाब पर्न जान्छ र शरीरको तापमान बढ्न सक्ने भएकाले पसिना पनि आउँछ ।
हात, काँध, च्यापु, दाँत र टाउकोमा दुखाई हुनु हृदय’घा’तको ल’क्षण हुनसक्छ । यस्ता संकेत देखिए समयमा नै उपचार गर्नुपर्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 13, 2021 April 13, 2021 110 Viewed